Real Madrid oo bar-tilmaameed ka dhiganeysa mid ka mid ah weeraryahanada ugu fiican Yurub - Hargeele - Wararka Somali State
Real Madrid oo bar-tilmaameed ka dhiganeysa mid ka mid ah weeraryahanada ugu fiican Yurub
January 14, 2020 313
(Madrid) 14 Jan 2020. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa bar-tilmaameed ka dhiganeysa mid ka mid ah weeraryahanada ugu fiican Yurub, si ay ugu xoojisato weerarkeeda.
Weeraryahanka RB Leipzig ee Timo Werner ayaa la soo jeedinayaa in ay xiiseyeyso Real Madrid sida lagu sheegay shabakada “Sky” oo Germnay ka soo baxda.
Los Blancos ayaa dooneysa in 23-sano jirkan ay soo qaadato si uu sare ugu sii qaado weerarkeeda, islmarkaana uu tartan ula galo weerar dooqeeda koowad ee Karim Benzema.
Waxaa xusid mudan in Luka Jovic uu ilaa iyo iminka la dhibaatonayo la qabsashada Real Madrid, taas oo kooxda Zidane ku sii qasbeysa in ay xooga saaran Werner.
Los Blancos ayaa qorsheeneysay inay la soo wareegto Timo Werner suuqii xagaaga ee lasoo dhaafay, inkastoo ay ku guul dareysatay, markaasoo qandraaskiisa lagu bur burin karay €60 million.
Si kastaba ha noqotee xiddigan reer Germany ee Timo Werner ayaa ka mid ah weeraryahanada ugu fiican ee ka ciyaara qaarada Yurub.
Ururka dhalinyarada Hirshabeelle oo ku howllan dayactirka biya xireenada wabiga
‘Locust swarm’ forces Ethiopian Airlines plane to divert – BBC News
Luis Suarez oo diray fariin adag kahor inta uusan ka tagin kooxda Barcelona
By admin September 5, 2020
Waa immisa lacagta uu ciyaaryahan walba oo xulka Taliyaaniga ka tirsan ka helayo ku guuleysiga tartanka Euro 2020?
“Memphis Depay ma ahan sida Messi ama Ronaldo” – Van Gaal oo ka hadlay wararka Depay la xiriirnaya Barcelona